Lahatsary: Mankalaza ny firodanan’ny rindrin’i Berlin izao tontolo izao · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Desambra 2018 7:44 GMT
Vakio amin'ny teny Nederlands, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, Español, Swahili, Français, македонски, English
Rindrin'i Berlin avy amin'i Natalie Maynor
Androany ny fankalazana ny faha 20 taonan'ny firodanan'ny Rindrin'i Berlin, rafitra fiarovana izay nanasaraka an'i Berlin Atsinanana sy Andrefana any Alemaina. Androany isika dia mampiseho ny sasany amin'ireo lahatsary manerana izao tontolo izao izay navoaka ho fankalazana ity daty ity sy ny dikan'izany sakana tsy any Alemaina ihany, fa manerana izao tontolo izao.
Tany Alemaina, nisy andiana sombina daomy goavana narafitra sy natsangana mba harodana ho fanamarihana ny fiafaran'ny Ady Mangatsiaka. Ity horonan-tsarin'ny NoCommentTV ity dia mampiseho ireo daomy, izay nolokoin'ny ankizy tany Alemaina ary koa nolokoin'ireo mpanakanto monina any amin'ny faritra hafa izay misy ny fizarazarana sy ny rindrina, napetraka. Tsy mandeha intsony ny safidy fidirana ao amin'ny lahatsary hafa, saingy azonao jerena ny fomba nampianjeran'ny daomy amin'ny fanindriana ity rohy ity mba hijery izany ao amin'ny pejy Youtube
Ao Kolombia, mamerina indray ny fianjeran'ny rindrina ny mpianatra amin'ny fandraisana anjara tsirairay handrava ny simenitra:
Avy any Alemaina, Alemà mpankafy daomy, Annodomino2007 namoaka ny daominy manokana ho fanomezam-boninahitra ny firodanan'ny rindrina, ary koa ny fankalazana ny faha 10 taona izay nanombohan'ny fitiavany daomy:
Tany Etazonia, nanangana zavatra endrika rindrin'i Berlin azo soratana ny mpianatra eny amin'ny oniversite, ho fomba iray hisarihana ny saina:
Avy any Meksika, VarinVxx nampiditra lahatsary manasongadina rindrina hafa iray mbola mitsangana: Is not Berlin, is not Palestine is US Mexico border The Wall of Shame in USA (Tsy i Berlin, tsy Palestina na sisintanin'i Etazonia Meksika, fa Rindrin'ny Henatra any Etazonia):
Krista Schyler ihany koa nampitaha ny rindrina Meksikana/Amerikana sy ny rindrin'i Berlin, amin'ity tranga ity, dia tsy mifantoka fotsiny amin'ny fiantraikany amin'ny fifindra-monin'ny olombelona, ​​fa avy amin'ny fiarovana ny biby mpirenireny ihany koa:
Ity andrana ho an'ny fanadihadiana avy amin'i Ziashere ity dia mampiseho rindrina hafa izay mbola mijoro eto amin'ity andrana ity, iray any Irlandy:
Ity lahatsary farany ity dia 2 taona, saingy mbola manan-danja, adamfilmaker nanadihady tanora avy any avaratra sy atsimon'ny rindrin'i Nicosia any Sipra, faritra iray ambenan'ny satroka mangan'ny Firenena Mikambana izay manasaraka ireo Sipra Tiorka sy ireo Sipra Grika, ka mahatonga ny fiavahany ho renivohitra farany misaratsaraka manerantany.
Sary avy amin'i Natalie Maynor, nampiasaina tamin'ny lahatsoratra araka ny Creative Commons Attribution License.